Nitaky vola 10 tapitrisa Ar: tratra ireo mpivady naka an-keriny zaza telo taona | NewsMada
Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava tany Andilamena, ny 3 jona 2019 lasa teo ireo mpivady tompon’antoka tamina raharaha fakana an-keriny zazalahikely iray 3 taona tany Soavinandriana Itasy, ny 24 mey 2019 lasa teo…
Nalain’ireo mpivady an-keriny tany Soavinandriana Itasy, tamin’io fotoana io, ity zazalahikely vao telo taona monja ity. Ny 25 mey 2019 dia nangataka vola mitentina 10 tapitrisa Ar ireo mpaka an-keriny, ary nilaza fa “ Raha omenareo io lelavola io izahay dia avotsotray ny zanakareo”, hoy ireo mpaka an-keriny, araka ny tatitra nampitain’ny polisy hatrany. Ny 28 mey 2019, nandefa vola iray tapitrisa ar ny ray aman-drenin’ilay zaza mba hahafantaran’izy ireo hoe iza marina ilay olona tompon’ilay laharana telefaonina finday nandefasana ilay vola. Noraisin’izy ireo ilay vola nalefa tany amin’izy ireo, saingy nisy kosa ny fiaraha-miasa teo amin’ny polisy misahana ny heloka bevava sy ireo sampandraharaha misahana ny antso an-telefaonina mba hahafahana mamantatra ny toerana misy ireo mpanao ratsy ireo. Fantatra taorian’ny fanadihadiana rehetra fa aty an-dRenivohitra ireo mpaka an-keriny ireo ary any amin’iny faritra Ivandry iny no misy azy ireo. Rehefa nitohy ny fanadihadiana dia ny 3 jona 2019, nisy laharana telefaonina finday hafa indray niantsoan’izy ireo hangalana vola ka rehefa natao ny fitsirihana dia fantatra fa any Andilamena no misy ireo olona miantso amin’io laharana io miaraka amin’ilay zazalahikely nalaina an-keriny, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany.
Efa voaomana mialoha ity fakana an-keriny ity…
Nidina avy hatrany tany an-toerana ny polisy miasa ao amin’ny sampana fikarohana heloka bevava niaraka tamin’ny polisy miasa ao Andilamena Alaotra Mangoro. Vokany, tovolahy iray sy vehivavy iray voasambotra niaraka tamin’ilay zazalahikely nalaina an-keriny. Rehefa nentina niakatra taty an-dRenivohitra nanaovana fanadihadiana izy ireo dia fantatra fa olona akaiky ireo ray aman-drenin’ilay zazalahikely nalaina an-keriny ihany no tompon’antoka tamin’ity raharaha ity, raha ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy. Nomarihin’ny polisy fa teo am-pivarotana no norebireben’ireo mpaka an-keriny ary mody nolazain’izy ireo hoe hoentina hitsangantsangana ilay zazalahikely kanjo nivadika ho fakana an-keriny izany. Fakana an-keriny efa nomanina, araka izany, ity raharaha ity, raha ny tatitra nampitan’ny polisy hatrany.